Mateo Asɛmpa No 9:1-38
Yesu saa obubuafo bi yare (1-8)
Yesu frɛɛ Mateo (9-13)
Wobisaa no akɔnkyen ho asɛm (14-17)
Yairo babea; ɔbea bi de ne nsa kaa Yesu ataade nguguso (18-26)
Yesu saa anifuraefo ne mum yare (27-34)
Nnɔbae a ɛsɛ sɛ wotwa no dɔɔso, nanso adwumayɛfo no sua (35-38)
9 Enti ɔforoo ɔkorow no, na otwa kɔɔ ɔno ara ne kurom.*+ 2 Na hwɛ! na wɔde obubuafo bi a ɔda kɛtɛ so rebrɛ no. Bere a Yesu huu wɔn gyidi no, ɔka kyerɛɛ obubuafo no sɛ: “Ɔba, ma wo bo ntɔ wo yam! Wɔde wo bɔne akyɛ wo.”+ 3 Ɛnna akyerɛwfo bi keka kyerɛɛ wɔn ho sɛ: “Damfo yi reka abususɛm.” 4 Ná Yesu nim wɔn adwene, enti obisae sɛ: “Adɛn nti na moredwen bɔne mo koma mu?+ 5 Mohwɛ a, nea ɛwɔ he na ɛyɛ mmerɛw, sɛ́ wɔbɛka sɛ, ‘Wɔde wo bɔne akyɛ wo,’ anaasɛ wɔbɛka sɛ, ‘Sɔre na nantew’?+ 6 Nanso, nea ɛbɛyɛ na moahu sɛ onipa Ba no wɔ tumi wɔ asaase so sɛ ɔde bɔne kyɛ nti—” afei ɔka kyerɛɛ obubuafo no sɛ: “Sɔre, fa wo kɛtɛ, na kɔ wo fi.”+ 7 Ɛnna ɔsɔree, na ɔkɔɔ ne fi. 8 Bere a nnipadɔm no huu eyi no, ehu kaa wɔn. Na wɔhyɛɛ Onyankopɔn a ɔde tumi a ɛte saa maa nnipa no anuonyam. 9 Afei, bere a Yesu refi hɔ akɔ no, ohuu ɔbarima bi a wɔfrɛ no Mateo sɛ ɔte baabi a wogyigye tow, na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Bedi m’akyi.” Ɛhɔ ara na ɔsɔree, na odii n’akyi.+ 10 Akyiri yi, bere a ɔredidi* wɔ fie hɔ no, hwɛ! wɔn a wogyigye tow ne nnebɔneyɛfo bebree bae, na wofii ase ne Yesu ne n’asuafo no didii.*+ 11 Na bere a Farisifo no huu eyi no, wobisaa n’asuafo no sɛ: “Adɛn nti na mo kyerɛkyerɛfo no ne wɔn a wogyigye tow ne nnebɔneyɛfo didi?”+ 12 Bere a ɔtee nea wɔreka no, ɔkae sɛ: “Nnipa a wɔwɔ ahoɔden no nhia ɔyaresafo, na mmom wɔn a wɔyare na wohia.+ 13 Afei monkɔ na munkosua nea eyi kyerɛ: ‘Mepɛ mmɔborɔhunu, na ɛnyɛ afɔrebɔ.’+ Na mammɛfrɛ atreneefo na mmom nnebɔneyɛfo.” 14 Afei Yohane asuafo no baa ne nkyɛn bebisaa no sɛ: “Adɛn nti na yɛne Farisifo no yɛ akɔnkyen* na w’asuafo no nyɛ akɔnkyen?”+ 15 Ɛnna Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Bere a ayeforokunu+ no da so wɔ ne nnamfonom nkyɛn yi, ɛbɛyɛ dɛn na wɔn werɛ ahow? Nanso bere bi bɛba a wɔbɛfa ayeforokunu no afi wɔn nkyɛn,+ ɛno na afei wɔbɛyɛ akɔnkyen. 16 Obiara nni hɔ a ɔde ntama foforo tare ataade dedaw mu; efisɛ ntama foforo no bɛtew afi ataade no mu, na ataade no bɛtew kɛse akyɛn kan no.+ 17 Saa ara nso na nkurɔfo mfa bobesa foforo ngu nsã kotoku dedaw mu. Sɛ wɔyɛ saa a, nsã kotoku no pae ma nsã no hwie gu, na nsã kotoku no sɛe. Mmom no, wɔde bobesa foforo gu nsã* kotoku foforo mu na abɔ abien no nyinaa ho ban.” 18 Bere a ɔreka eyinom akyerɛ wɔn no, hwɛ! ɔpanyin* bi a na waba hɔ bɛkotow no kae sɛ: “Saa bere yi de, ɛbɛyɛ sɛ me babea no awu; nanso bra na fa wo nsa begu no so, na ɔbɛba nkwa mu.”+ 19 Ɛnna Yesu sɔree, na ɔne n’asuafo no dii n’akyi. 20 Na hwɛ! ɔbea bi a mogya atu no+ mfe 12 faa n’akyi de ne nsa bɛkaa n’ataade nguguso ano.+ 21 Nea na ɔreka wɔ ne mu ne sɛ: “Sɛ mede me nsa ka n’ataade nguguso no kɛkɛ mpo a, me ho bɛtɔ me.” 22 Yesu dan ne ho, na ohuu no no, ɔkae sɛ: “Ɔbabea, ma wo bo ntɔ wo yam! Wo gyidi ama wo ho atɔ wo.”+ Na saa bere no ara, ɔbea no ho tɔɔ no.+ 23 Afei, bere a Yesu baa ɔpanyin* no fi, na ohuu wɔn a wɔrebɔ atɛntɛbɛn ne nnipadɔm a wɔreyɛ gyegyeegye no,+ 24 Yesu kae sɛ: “Mumfi ha, na abeawa no nwui, na mmom wada.”+ Ɔkaa saa no, wofii ase serew no. 25 Bere a nnipadɔm no fii adi ara pɛ, ɔkɔɔ baabi a abeawa no da no kosoo ne nsa,+ na abeawa no sɔree.+ 26 Nokwarem no, eyi ho asɛm trɛw kɔɔ mpɔtam hɔ nyinaa. 27 Bere a Yesu fii hɔ a ɔrekɔ no, anifuraefo baanu+ dii n’akyi teɛteɛɛm sɛ: “Dawid Ba, hu yɛn mmɔbɔ.” 28 Bere a ɔkɔɔ fie hɔ no, anifuraefo no baa ne nkyɛn, na Yesu bisaa wɔn sɛ: “Mowɔ gyidi sɛ metumi ayɛ eyi?”+ Wobuaa no sɛ: “Yiw, Awurade.” 29 Ɛnna ɔde ne nsa kaa wɔn ani+ kae sɛ: “Sɛnea mo gyidi te no, ɛnyɛ saa ara mma mo.” 30 Na wɔn ani huu ade. Bio nso, Yesu ka kyerɛɛ wɔn denneennen sɛ: “Monhwɛ na obiara ante ho asɛm.”+ 31 Nanso bere a wopuee abɔnten no, wɔmaa mpɔtam hɔfo nyinaa tee ne ho asɛm. 32 Bere a wɔrefi hɔ no, hwɛ! nkurɔfo de mum bi a ɔwɔ honhommɔne brɛɛ no.+ 33 Na bere a otuu honhommɔne no, ɔbarima a ɔyɛ mum no kasae.+ Ɛmaa nnipadɔm no ho dwiriw wɔn, na wɔkae sɛ: “Wonhuu biribi a ɛte sɛɛ da wɔ Israel.”+ 34 Nanso Farisifo no kae sɛ: “Ɔnam ahonhommɔne panyin so na etu ahonhommɔne.”+ 35 Na Yesu kokyinkyin nkurow ne nkuraa nyinaa mu, na ɔkyerɛkyerɛe wɔ wɔn hyia adan mu kaa Ahenni no ho asɛmpa, na ɔsaa nyarewa ne ahoɔmmerɛw nyinaa bi.+ 36 Bere a ohuu nnipadɔm no, wɔyɛɛ no mmɔbɔ,+ efisɛ na wɔayɛ sɛ nguan a wɔapirapira wɔn agyaw wɔn agu hɔ a wonni hwɛfo.+ 37 Ɛnna ɔka kyerɛɛ n’asuafo no sɛ: “Nea ɛwom ne sɛ, afuw no mu nnɔbae a ɛsɛ sɛ wotwa no dɔɔso, nanso adwumayɛfo no sua.+ 38 Enti monsrɛ afuw Wura no, na ɔnsoma adwumayɛfo mmetwa ne nnɔbae no bi.”+
^ Kyerɛ sɛ, Kapernaum, baabi a na Yesu taa tena yɛ ne som adwuma no wɔ Galilea asaase so no.
^ Anaa “ɔte pon ho redidi.”
^ Anaa “tenaa pon ho didii.”
^ Anaa “di mmuada.”
^ Anaa “sodifo.”